Ukuphupha ngeemabhile ▷ Discover Discover Online ▷ ➡️
I-Marble yinto enzima, kodwa kwangaxeshanye intle ngokumangalisayo. Ayothusi into yokuba uninzi lwabazobi bakhethe njengesiseko semifanekiso yabo eqingqiweyo kunye nemisebenzi yobugcisa. Umzobi wase-Itali uMichelangelo wayesele eyazi ukuba uza kuwusebenzisa njani umdlalo wakhe wokukhanya phakathi kweendawo ezipholileyo kunye nezingafakwanga.
Ukongeza kumagcisa abonwayo njengababazi bemifanekiso eqingqiweyo, amatye amatye asebenza imarble ngezixhobo zabo zokwenza imifanekiso eqingqiweyo, imihombiso, kodwa nezinyuko, iibhentshi, iitafile, ii-facade, imithombo kunye nokunye okuninzi. Unokuhlala ufumana amabhastile asetyenziswa kwiimyuziyam okanye kwizakhiwo zembali.
Nabani na ophupha ngamatye emarmore angamangaliswa kukubonakala kwale nto intle xa elele. Ngoku funda konke malunga nentsingiselo yalo mfanekiso uphuphayo:
1 Uphawu lwephupha «marble» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «marble» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «marble» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «marble» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ekuchazeni kwawo kuzisa ubunjani bemarble. Ke ngoko, tolika imabhile yephupha ngokuyintloko njengophawu lwe ukuqina okanye ngaphezulu. Isimboli yephupha elithi "marble" iya kuthi ke ibonakalise owona mnqweno ungaphakathi wephupha wento eqhubekayo ebomini bakho. Ungathanda ukubambelela kule kwaye uyisebenzise njengesiseko sobomi bakho bexesha elizayo.
Imarble njengophawu lwephupha inokuthi yalathe kwimilo okanye ukubangisana kwazo zonke iintlobo ebomini bokuvuka, ekufuneka umphuphi alwe yedwa. Awunakulindela uncedo lwangaphandle. Ukucamngca ngemabhile ephupheni kufuna ukuphupha ayinakwenzeka bonisa iiprojekthi ezithile.
Inkwali yemarble njengophawu lwephupha ihlala ibonisa ubomi obunempumelelo kwezoqoqosho ngaphandle kothando nothando lwendalo ekhulayo. Ukuphathwa okanye umsebenzi wemabhile ephupheni ufuna ukufuzisela ngokuphupha into yokuba umsebenzi ophantse unganyibiliki wabelwe wona el mundo ukuvuka okanye ukungena kwinkampani yabantu abangenankathalo.
Ukuba iphupha lipholisha i-marble okanye i-limestone ephupheni, unokulindela ilifa elimnandi kwihlabathi elivukayo. Imarble eyaphukileyo njengophawu lwephupha ibonisa, ngokokuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, ukuba ukuphupha kuya kuba yinto engathandekiyo kwihlabathi elivusayo, kuba ayikuhoyi isimilo nokuziphatha.
Ukubona komfanekiso wemarble ephupheni, njenge-sphinx, kunokubonwa njengepropathi ekhuselekileyo nezinzileyo. Abahlobo ukutolika. Ikholamu yemarble njengophawu lwephupha, kwelinye icala, luphawu lokulangazelela okuhle kodwa okungafikelelekiyo.
Kwelinye icala, inokuchazwa ukuba ithetha ukuba iphupha ngamanye amaxesha linenkani kwaye linamathela kuluvo olungelulo. Itafile yemabhile ephupheni okanye ukuhlala kuyo injalo itolika ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njengethemba lamaphupha lomnqweno onokufezekiseka ngokulula okanye injongo enokufezekiseka ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ezi ziya kudibana kuphela emva komzamo omkhulu kunye nomzamo.
Uphawu lwephupha «marble» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa ngokwasemphefumlweni, uphawu lwephupha "marble" lithetha inkohlakalo y Ubumdaka. Kwakhona, imarble ephupheni inokuba luphawu lokuba izinto ezilindelweyo kunye neenjongo azinakufezekiswa konke konke okanye kuphela ngomzamo omkhulu.
Ngokubhekisele kubuhle bemarble, oku kunokuba yintuthuzelo kwiphupha lokuba uyindlela engqwabalala kuye kwihlabathi elivukayo. Ukuphuculwa komntu ikhethiwe.
Uphawu lwephupha «marble» - ukutolika kokomoya
Inqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha libona kwisimboli yephupha "marble" uphawu lwe ukuzingisa ngokomoya.
Iphupha malunga nePanda